हिउँदमा, कहिल्यै भन्दा बढी तातो घाम र न्यानो समुद्र चाहन्छु। डिसेम्बर - विदेशी गन्तव्यहरू यात्रा गर्न सही समय। त्यसैले आराम र एक असामान्य ठाउँमा नयाँ वर्ष मनाउन! जहाँ नयाँ वर्ष बिदा जाने, तपाईं निर्णय। हाम्रो सिफारिसहरू जहाँ यो डिसेम्बर र जनवरीमा न्यानो एक स्थान फेला पार्न मद्दत गर्नेछ।
पर्यटकहरुका लागि सिफारिसहरू
जाडो बिदा आनन्द र cheerfulness ल्याउन, यो ध्यानपूर्वक देश को विकल्प विचार गर्नुपर्छ। शरीर नयाँ तापमान अवस्था भिज्न समय थियो भनेर, बाँकी निकै छोटो हुनु हुँदैन। उदाहरणका लागि, जहाँ यसलाई डिसेम्बर मा न्यानो छ देश एक यात्रा, छैन कम 8-10 भन्दा दिन, अन्यथा यात्रा विशेष गरी मौसम-संवेदनशील मान्छे को लागि, स्वास्थ्य मा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ हुनुपर्छ। परिपक्व उमेर र जवान छोराछोरीको व्यक्ति एक नम्र जलवायु संग मार्गहरू चयन गर्नुपर्छ, र दिन को उत्तेजक घण्टाको सूर्यका जोगिन। सनस्क्रीन र टोपी को सबै प्रकार - सागर मा "नरिवल प्रमोदवनमा" मा अनिवार्य।
सबैभन्दा ट्रपिकल देशहरूमा जहाँ यो नोभेम्बर र डिसेम्बरमा न्यानो छ
मिश्र - रूस र युक्रेन बाट पर्यटकहरुका लागि एक लोकप्रिय ठाउँ। को हिउँदमा सस्ता विकल्प। यो सबै वर्ष दौर न्यानो छ, तर राति हावा तापमान डिसेम्बर मा नाटकीय खस्छ। लाल समुद्रमा पौडिरहेका अचानक बलियो हावा कारण असहज बन्ने छ, तर साइट मा राम्रो-सुसज्जित स्विमिंग पूल अक्सर अवस्था बचत गर्नुहोस्।
थाईल्याण्ड - यो प्रमोदवनको लागि एक यात्रा को वर्षाको सिजन भन्दा हुँदा यो हिउँदमा छ विश्वभरिबाट पर्यटकहरु प्रसन्न। जहाँ यो डिसेम्बर मा न्यानो छ तपाईंलाई थाहा छैन? थाईल्याण्ड चयन - सम्झना छैन! नीलो cloudless आकाश, भव्य बलौटे समुद्री तट, सागर छालहरू भन्दा झुकाव सुरम्य खजुरका, अविस्मरणीय क्षण दिनेछु।
डिसेम्बर मा संयुक्त अरब एमिरेट्स - बस एक समुद्र तट छुट्टी, तर पनि आश्चर्यजनक किनमेल छ। संयुक्त अरब एमिरेट्स मा वर्ष को अन्तिम महिनामा बिक्री को मौसम, जसको लागि पर्यटक हरेक दिन हजारौं देश आउन आउँछ। मौसम अवस्था यो अवधिमा पौडी अनुमति छैन, तर उत्तरी अक्षांश को बासिन्दा लागि जलवायु भन्दा सहज छ।
स्नेह, सुन्दर सूर्य र caressing समुद्र लागि, धेरै भारत चयन गर्नुहोस्। गोवा - डिसेम्बर मा एक स्वर्ग, जहाँ गर्मी। भिन्नताहरूलाई को अचम्मको देश चिसो देशका आगंतुकों आकर्षित गर्छ।
डोमिनिकन गणतन्त्र सबैभन्दा महंगा रिसोर्टमा देशहरूको एक मानिन्छ। यो सेवा, समुद्री तट र प्रतिष्ठित होटल को सुन्दरतामा मुख्यतया कारण छ। प्रयोग गर्ने छैन ती छुट्टी मा सुरक्षित गर्न, शायद क्रिस्टल पानी चयन गर्नेछ क्यारेबियन सागर को र हिउँ-सेतो तटों।
नयाँ वर्ष बिदा मा युरोपेली देशहरूमा रोमाञ्चक यात्राको रमाइलो गर्न। स्वाभाविक, युरोप - यो जहाँ यो डिसेम्बर मा न्यानो एक ठाउँमा छ। तथापि, इटाली, ग्रीस र स्पेन, कुनै कठिन चिसो छ। समुद्र मा पानी को तापमान एक स्नान अनुमति छैन, तर भुइँमा उज्यालो तन सम्भव छ प्राप्त। तर पर्यटकहरु लाखौं किन यहाँ आएको छैन। जाडो - तपाईं आकर्षण छैन धेरै देख्न सक्छ जब समय सूर्य मार्फत भुना र गर्मी को थकित छैन। मुख्य लक्ष्य भने - विश्व हेर्न प्राप्त संसारको प्रतिभावानबाट कामहरू थाह, युरोपेली देशहरूमा सबैभन्दा प्रसिद्ध संग्रहालयहरु लागि प्रतीक्षा गर्दै छन्!
हाइनान। मौसम महिनाको लागि। यो के हो?
मलोर्का - महिनाको लागि मौसम: डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अन्य महिना
"Floksal" (आँखा खस्छ) - अनुप्रयोग सुविधाहरू
तपाईंको व्यापार प्रवर्द्धन गर्न विश्वसनीय उपकरणहरू। SocialKit - सबै भन्दा राम्रो कार्यक्रम "इन्स्टाग्राम" को लागि
Cataracts। रोग लक्षण
दूध माछा र सबै संग जोडिएको
म chanterelles स्थिर गर्न सक्छन् र कसरी सही गर्न?
कसरी कोर्ट मार्फत बेईमान उधारकर्ताओं सजाय?